Fahasalamana :: An’aliny ireo olona voan’ny tazomoka • AoRaha
Fahasalamana An’aliny ireo olona voan’ny tazomoka
Tsy nitsahatra niakatra ny isan’ny olona voan’ny tazomoka, nanomboka tamin’ny faran’ny taona 2019 hatramin’ny volana janoary 2020 lasa teo. Nahatratra enina amby roapolo sy eninjato sy arivo sy roa alina ireo olona voan’ity aretina ity nandritra ny herinandro voalohany tamin’ny novambra 2019. Zaza latsaky ny dimy taona ny ankamaroan’ireo nitondra ny aretina. Distrika dimy: Midongy Atsimo, Befotaka, Ikalamavony, Nosy varika ary Iakora, kosa no mbola lasibatry ny tazomoka, tamin’ ny volana janoary . Na izany aza, nahitana trangan’aretina ihany koa tany amin’ny distrika hafa, tamin’ity volana febroary ity.
“ Naharaisana trangan’aretina tazomoka avokoa teny amin’ny tobim-pahasalamana rehetra ao anatin’ny distrika fitoa amby zato, izany hoe saika nanerana an’i Madagasikara mihitsy. Voan’io aretina io ny 50% hatramin’ny 60% -n’ireo olona mitaraina fa miakatra hafanana tany amin’iretsy distrika dimy farany, nandritra ny volana janoary 2020. Distrika telo hafa indray no nahitana ny tranga maro tamin’ny faramparan’ny volana janoary”, araka ny tatitra avy amin’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka, omaly.
Etsy ankilany, nanamafy ny talen’ny fampiroboroboana ny fahasalamana ao amin’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka, ny Dr Rakotoarivony Manitra fa “ namoizana ain’olona mihitsy io aretina io saingy tsy mbola voafaritra ny tarehimarika mirakitra an’izany”. Manamafy iry tompon’andraikitra iry fa misy tazo mahery mihanaka amin’ny distrika maro, ankehitriny.
“ Tokony hitandrina ny tsirairay manoloana an’izany. Mila manatona toeram-pitsaboana avy hatrany raha toa ka misy tsy fahasalamana”, hoy indray izy. Na izany aza, efa manana paikady hiatrehana sy entina misoroka ny aretina ny ao amin’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka.
Horonantsary mamoafady Tratra ilay lehilahy namoaka sarin-jazakely
Fitiliana ny tsimok’aretina « Covid-19 » Hanokatra laboratoara maromaro ny fitondram-panjakana
Fiomanana amin’ny fetin’ny paska Hitety tokantrano ireo mpitondra fivavahana mandritra ny Herinandro masina
Tan-tsoriky ny fanjakana Haterina isam-baravarana ny fanampiana ho an’ny mpianatry ny oniversite
Fisorohana aretina « Coronavirus » :: Tafakatra fito ambin’ny folo ireo olona arahi-maso eny Anosiala
Fikirakirana solosaina :: Namoronana lalao ny fiarovana ny zon’ny ankizy